यदि तपाई यि चार राशि मध्ये पर्नुभयो भने ढुक्कहुनुहोस खुल्दैछ भाग्यको ढोका !! | सुदुरपश्चिम खबर
यदि तपाई यि चार राशि मध्ये पर्नुभयो भने ढुक्कहुनुहोस खुल्दैछ भाग्यको ढोका !!
Hindu God Laxmi Ganesh at Diwali Festival
हुनत ः धनसम्पति कमाउन र धनी बन्न धेरै नै मेहनत गर्नुको विकल्प छैन । तर केही राशिहरुका लागि भने भाग्यमा नै धनी बन्ने संभावना हुने गर्दछ । कतिपयले यसलाई किस्मत भन्दछन् । कुल १२ राशिमध्ये ४ राशिका ब्यक्तिलाई उनी हरुको भाग्यले नै धनी बन्न साथ दिन्छ। निम्न ४ राशिका ब्यक्तिले धेरै नै सम्पति कमाउँन सक्ने ज्योतिष विद्याका जानकारहरु बताउँछन ।
१. वृष राशि वृष राशिका जातकमा सुन्दर र विलाशी सामान किन्ने शौख हुन्छ । औसत ब्राण्डका सामग्री यी राशिका ब्यक्तिलाई मन पर्दैन । तसर्थ यी राशिका ब्यक्ति स्वतः धेरै धन कमाउन लालायीत हुने गर्दछन् । साथै वैभव प्राप्तिका लागि पनि यस राशिका ब्यक्तिलाई भाग्यमानी मानिन्छन्। उनिहरुलाई धनी बनाउन राशि नै सहायक बन्ने गर्दछ ।
२. वृश्चिक राशि धनी बन्ने सूचीमा वृश्चिक राशिका जातक पनि पर्दछन् । यस राशिका ब्यक्तिलाई भौतिक वस्तुको आकर्षण हुने गर्दछ । ठूला घर, कार, ब्यापार ब्यवसाय प्रति उनिहरु लिप्त हुन्छन । दृढ निश्चयी भएका कारणले पनि सम्पति कमाउने मामलामा वृश्चिक राशिका ब्यक्ति आफंै पनि मेहनत गर्दछन् भने भाग्यले पनि साथ दिने गर्दछ ।
३. कर्कट राशि कर्कट राशिका जातकलाई धन, सम्पति कमाउन भाग्यले नै साथ दिने गर्दछ । यी राशिका ब्यक्ति अवसरका खोजिमा हुन्छन् । जहाँ उनिहरुको रहर पूरा गर्न राशि नै सारथी बनिदिन्छ । कर्कट राशिलाई स्वभावत ः धनी बनाउन उनिहरुको आकांक्षा र भाग्य बलियो हुने गर्दछ । यी राशिका ब्यक्ति जग्गाजमिनको कारोबारबाट चाडैं धनि बन्ने गर्दछन् ।
४. सिंह राशि सिंह राशिका जातकलाई भीडका बिचमा आफ्नो पहिचान बनाउने शौख हुन्छ । उनिहरु अन्य राशिका ब्यक्ति भन्दा फरक हुने चाहाना राख्दछन् । साथै उनिहरुलाई सम्पतिको मामलामा राशिले पनि साथ दिने गर्दछ । महंगा कार, गरगहना, रुपैयाँ पैसाको चाहाना उनिहरुको सामान्यतया ः पूरा हुन्छ । उल्लेखित सूचीमा तपाईको राशि समावेश छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस् । किनकी सम्पति वा नाम कमाउन आफ्नो मन, मष्तिष्क र मेहनतले नै पूरा गर्ने । (gnewsnepal बाट सभार)
तीन वर्षको उमेरसम्म बच्चालाई जे ख्वाइन्छ !!
बिहीवार यसरी गर्नुहोस् भगवान बिष्णुको पूजा मिल्नेछ शुभ लाभ !!
बिहान बिहानै तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर खाँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा !!
मौसम परिवर्तन हुने वेला कस्तो खानेकुरा खाने ?
मोटरसाइकल र बस एक आपसमा ठोक्किदा दुई जनाको मृत्यु !!